Sida loo qaabeeyo ogeysiiska Apple Watch | Wararka IPhone
Sidaad wada ogtihiin, mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee Apple Watch waa inuu naga hor istaago inaan si joogto ah uga soo saarno iPhone-ka jeebkeena. Si tan loo gaaro, smartwatch, iyo waxyaabo kale, waxaan tusi doonaa dhammaan ogeysiisyada waana la macaamili karnaa iyaga si aan ugu raaxaysano.
Marka Apple Watch uu ku xiran yahay iPhone-keena Bluetooth ama WiFi, wax kasta oo loo diro iPhone-ka ayaa lagu soo bandhigi doonaa saacadeena. Sidaas oo kale ayeyna ahaan doontaa intayada IPhone wuu xiran yahay, saacaddeenuna waxay xiriir la leedahay maqaarkayaga. Ogeysiisyada la soo bandhigay, dabcan, waxay ku xiran yihiin annaga iyo kuwa aan u qaabeyno inay nasoo gaaraan.
Waxaan furaynaa Barnaamijka Apple Watch on our iPhone.
Waan taabnaa tabta Saacaddayda xagga hoose.
Waan ciyaarnay Ogeysiisyada.
Waxaan dhaqaajineynaa Tusiyaha Tusiyaha si aan ugu aragno dhibic liin dusha sare ah Apple Watch wajigiisa markaan haysanno ogeysiisyo aan la aqrin.
Waan dhaqaajinaynaa Asturnaanta Ogeysiiska markaa waxaad u baahan tahay inaad taabato si aad u aragto faahfaahinta ogeysiisyada.
Taabo barnaamij ka socda App Store si loo habeeyo ogeysiisyada mid walba.
Qaar ka mid ah codsiyada ka socda App Store iyo qaar ka mid ah codsiyada Apple ayaa noo oggolaanaya oo keliya inaan kala dooranno ka tarjumaya dejimaha ogeysiisyada iPhone-ga ama joojiya ogeysiisyada barnaamijkaas gebi ahaanba. Codsiyada kale ee Apple waxay na siinayaan ikhtiyaar saddexaad oo ah kaas oo ah habayn (7). Haddii aan dooranno xulashadan, xulashooyin cusub ayaa u muuqda kuwo la heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sida loo dejiyo ogeysiisyada ku saabsan Apple Watch
Maxay noocyada isboorti qaar ugu yimaadaan sanduuqyo dhaadheer kuwa kalena sanduuq laba jibbaaran ???
Intaan ogahay, isboortiga waxaa lagu galayaa sanduuq dheeri ah, kuwa laba jibbaaranna waa Daawasho. Maxaa dhacaya waa in qaar ka mid ah Watch ay leeyihiin xargo sida Sport.
Maxaan u arki waayey ogeysiisyada whatsapp saacadda? Marka la joogo Messenger wax dhib ah malahan… .Waxaan horeyba u tijaabiyay wax walba… way caawineysaa
Waxa saxda ah ee isku mid ah ayaa igu dhacay usbuuc ama wax ka badan, ka hor intaanan helin ogeysiisyo iyo hadda oo aanan helin.